Finfinnee Barattooti Hidhamaa jiru; Fincillis Itti Fufe! - OPride.com
Oduu Qeerroo, Finfinnee, Ebla 15, 2011) Diddaa ummataatiin raafamaa kan jiru, mootummaan Mallasaa humnoota isaa “Agaazii” barattoota irratti bobbaasee hidhuu fi hiraarsuu itti fufee jira. Barattootis “diddaan karaa nagaatiin taasisamu aangoo abbootii irreetti daangaa tolchuuf malee nagaa fi misooma biyyaatti gufuu ta’uu miti,” jechuun diddaa isaanii itti fufanii jiru.
Guyyaa har’aas barattooti Yunivarsitii Finfinnee kan mooraa jaha keessa baratan, humnoota tikaatiin qabamanii gara hin beekamnetti geessamaa jiru. Keessaayyuu, guyyaa har’aa, ebla 15, 2011, barataa Abdisaa Baqaallaa, waggaa 4ffaa History kan baratu, humnooti tikaa ukkaamsanii bakka hin beekamnetti geessanii jiran.
Haaluma walfakkaatuun barataa Geettuu Saqaataa, waggaa 5ffaa kan seera[law] barataa jiru, bakka inni barumsaa fi hojii itti shaakalaa ture, mana murtii Oromiyaa irraa qabanii gara hin beekamnetti dabarsan kanneen ijaan argan nuuf dhaamanii jiru.
Har’a ganama naannoo saatii 9:00AM irratti immoo mooraa kiiloo 6 keessaa barataa Nagaa kan waggaa 4ffaa barnoota muummee Poletical science baratu qabanii gara hin beekamnetti akka geessan barameera.
Humni Wayyaanee sodaan guutame baratttoota hidhuu keessa darbee humnoota isaa tikaa fi basaasaa mooraa Yunivarsitii keessatti bobbaasuun akka isaan barattoota ukkaamsan gochaa jrti. kana malees, yeroo ammaa kanatti hidhattooti Wayyaanee barattoota fakkaatanii doormii keessa akka jiraatan kan godhame ta’uun beekamee jira.
Showdown with EPRDF Cadres in Los Angeles